Khuphela i-Ghostbusters yeHlabathi ngoku ukuphelisa iziporho kwindawo yakho | Zonke iinkonzo ze-intanethi
[APK] Khuphela ngoku i-Ghostbusters World kwi-Android yakho ukuzingela iziporho ezijikeleze isixeko sakho
UManuel Ramirez | | APK, Imidlalo ye-Android, Tutorials
I-Ghostbusters yeHlabathi ngoku iyafumaneka kwiselfowuni yakho ye-Android, ubuncinci i-APK esinokonwabela ngayo lo mdlalo ungathandabuzekiyo ukulandela abanye abaninzi abadibanisa iscreen seselfowuni kunye nenyani yobomi bemihla ngemihla.
Ukulandela impumelelo enkulu yePokemon GO okanye abahamba ekufeni abahambayo, Ihlabathi leGhostbusters itayayitha entsha kwilizwe lokwenyani elingathandabuzekiyo ukuze utsale i-GPS, ikhamera yeselfowuni kunye ne-gyroscope ukuze ukwazi ukujolisa kwifowuni yakho.
1 Ghostbusters kwi-Android yakho
2 Ngeqela labadlali abaninzi
3 Ihlabathi le-Ghostbusters kwindawo yakho
Ghostbusters kwi-Android yakho
Ghostbusters Ihlabathi lifuna thabatha wonke loo moya mhle waseHollywood Apho sidibana khona nabagxeki abagwenxa. Ibali lisisa ngokupheleleyo kule bhanyabhanya ukuze ufumane isixeko okanye idolophu yakho izele ziziporho oya kuthi uzizingele ngeselula yakho. Umdlalo osebenzisa ukungathandwa kwenyani enkosi kubuchwephesha bemephu.
Ke kuya kufuneka Sebenzisa umqadi weproton ukubamba ezo ziporho, ngaphandle kokubonakala kuyo yonke indawo, zivela kuyo yonke imilinganiselo. Ifranchise enkulu ifike kwiVenkile yeGoogle yokuDlala ukuze uphinde ukhumbule ukuzonwabisa kwabalinganiswa abane abahle, omnye wabo udlalwe nguBill Murray omkhulu.
Umbono ulula, uya kuba nemephu yokwenyani ye imephu yendawo ohlala kuyo kwiselfowuni yakho ukuze kuvele iziporho ezahlukileyo kwaye ke uye kubo uzizingele ngeplanga lakho leproton. Ngale ndlela, inyani ixutywe nemizobo "cel shadow" a la Imida apho umdlalo onomdla kakhulu ufezekiswa kwimbonakalo ebonakalayo.
Ngeqela labadlali abaninzi
Ihlabathi le-Ghostbusters liphuma kumaxesha amaninzi abadlali esingafanele siphoswe. Siya Ukuthetha ngomphathi omkhulu wesiporho oko kuyakwenza ukubonakala kwayo kweenkwenkwezi okwexeshana. Kulapho sinokuthi sonwabe ekuyihlaseleni kunye nabanye abadlali, esongeza amandla amakhulu kunye nolonwabo kubo bonke abo bakonwabelayo nabahlobo kunye noogxa babo.
Elinye lamanqaku alo abangel 'umdla libali elahluke kancinane kuleyo siyaziyo kwiimovie, nangona abalinganiswa ababalulekileyo beza kuphuma kuyo. Uya kuba nethuba lokudala iqela lakho lesiporho ukuba lithathe inxaxhebar kwi-PvP okanye kwi-PvP kwimidlalo ye-Ghostly Dimension. Ngamanye amagama, kuya kufuneka ubeke iibhetri zakho ukuze ujongane nabanye abadlali ngaphandle kwenyani kwaye oko kubonisa ukuba kukho umxholo owahlukileyo onokuyonwabela kwiGhostbusters yeHlabathi.
Ihlabathi le-Ghostbusters kwindawo yakho
Kuya kufuneka ujonge iingcango ezilinganayo ezithe saa ujikeleze ubumelwane bakho kwaye uvumela iziporho ukuba zingene kubukhulu bethu. Kulapho unokufumana khona izixhobo eziluncedo kakhulu kunye nezinto zokuzingela ezo ziporho ngokungathi ungomnye wabalinganiswa aba-4 beefilimu zaseHollywood.
I-Ghostbusters yeHlabathi izakuzama ukuba ngumgangatho kwimidlalo yokwenyani eyongeziweyo ukuze Guqula ubumelwane bakho bube yindawo epheleleyo apho kuya kufuneka uyazi ukuba uzula njani ukuze ususe zonke ezoziporho.
Ngokobuchwephesha kwiGhostbusters yeHlabathi intle kakhulu. Siyakubalaselisa oko ubuchule bokubonisa «iseli umthunzi» kwaye idityaniswa ngokugqibeleleyo nendalo yokwenyani, njengakwinyani yesiporho. Ngoku kuya kufuneka siqwalasele umphumo wokuba isihloko sifuna ukuba i-GPS iqhagamshelwe, sisebenzisa ikhamera kunye ne-gyroscope ngalo lonke ixesha, esenza kwibhetri, ngaphandle kokulibala umba obonisa ngemizobo. Ndiyathemba ukuba bayisebenzile kwaye asiboni ukuba ipesenti yebhetri yehle ngokukhawuleza.
Ihlabathi le-Ghostbusters likuvumela ukuzingela iziporho kwindawo yakho ngenyani eqinisekisiweyo yolonwabo lwakho oluphezulu. Okwangoku ayifumaneki ngokwengingqi, nangona ungayikhuphela i-APK ukuyifaka kwaye uvavanye isixhobo sakho seproton phambi komnye umntu. Ngoku siza kubona ukuba iyahlaziywa ngamathuba athile ukuze sikwazi ukufumana umxholo ngakumbi kwaye siqhubeke nokonwabela esinye isihloko sokwenyani esiNgezelelweyo.
Khuphela i-APK: Ihlabathi le-Ghostubsters.
Inkqubo elungileyo yomthunzi weseli
Ghostbusters kwindawo ohlala kuyo
Ghostbusters -Ihlabathi leGhostbusters
Umthuthukisi: IsineXhine Inc.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » APK » [APK] Khuphela ngoku i-Ghostbusters World kwi-Android yakho ukuzingela iziporho ezijikeleze isixeko sakho
I-OnePlus 6T ibonakala kwiifoto zokwenyani kwaye uyilo lwayo luyabonakala
Ukudlala kwakhona kwe-YouTube kucinyiwe kwiscreen